Mpitsara 20 - Ny Baiboly
Mpitsara toko 20
Ny adin'ny fokon'Israely tamin'i Benjamina.
1Dia nivoaka ny zanak'Israely rehetra hatrany Dana ka hatrany Bersabea sy ny tany Galaada; ka nivory teo anatrehan'ny Tompo tany Masfà, toy ny olona iray ihany, ny fiangonana. 2Ary ny filohan'ny vahoaka rehetra, ny fokon'Israely rehetra, niseho teo amin'ny fiangonan'ny vahoakan'Andriamanitra, dia lehilahy efatra hetsy mandeha an-tongotra mahatan-tsabatra. 3Nandre ny taranak'i Benjamina fa hoe niakatra any Masfà ny zanak'Israely. Ary hoy ny zanak'Israely: Mitenena, nanao ahoana no nanaovana izao heloka izao? 4Dia ilay Levita vadin-dravehivavy novonoina no niteny ka nanao hoe: Niditra handry tany Gabaà, any Benjamina, izaho sy ny vady tsindranoko. 5Ary nitsangana hamely ahy ny mponina tao Gabaà; ny trano nisy ahy nohodidininy mandritra ny alina; ny tenako nokendreny hovonoina, ny vady tsindranoko nanaovany an-keriny, ka maty. 6Dia nalaiko ny vady tsindranoko ka norasaiko sy nampitondraiko eran'ny tany rehetra lovan'Israely; fa heloka sy zavatra mahafa-baraka loatra amin'Israely no nataon'izy ireo 7Koa indreo ao hianareo zanak'Israely rehetra, mifampilà saina hianareo, ary tapaho eto ihany izay hevitra. 8Indray nitsangana, toy ny olona iray ihany, ny vahoaka rehetra ka nanao hoe: Tsy hisy hiverina any an-daintsika akory isika na hody any an-tranontsika. 9Izao kosa ankehitriny no hataontsika amin'i Gabaà: Araka ny filokana no hamelezana azy. 10Ny fokon'Israely rehetra dia hangalantsika lehilahy folo isan-jato, zato isan'arivo, arivo isan'alina, handeha haka vatsy ho an'ny vahoaka, ka rahefa tonga izy, dia araka ny zavatra mahafa-baraka indrindra nataony tamin'Israely no hatao amin'i Gabaàn'i Benjamina koa. 11Toy izany no nivorian'ny lehilahy rehetra amin'Israely, tafakambana toy ny olona iray ihany, hamely ny tanàna.
12Naniraka ho any amin'ny fianakavian'i Benjamina rehetra ny fokon'Israely hilaza hoe: Ahoana izany heloka natao tany aminareo izany? 13Koa ankehitriny, atolory anay ireo olona ratsy fanahy ao Gabaà, ireo, hamonoanay azy sy hanesoranay ny ratsy eo afovoan'Israely. Tsy nety nihaino ny feon'ny zanak'Israely rahalahiny anefa ny Benjamita.
14Koa nivoaka ny tanànany ny taranak'i Benjamina ka nivory tao Gabaà mba hiady amin'ny zanak'Israely. 15Nisaina tamin'izany andro izany ny taranak'i Benjamina nivoaka ny tanàna ka enina arivo sy roa alina, samy mahatan-tsabatra, no isany, afa-tsy ny mponina tao Gabaà, fiton-jato lahy voafantina. 16Nisy fiton-jato lahy voafantina tamin'ireo vahoaka rehetra ireo tsy mampiasa ny tànany havanana; ireo mpiady ireo samy mahay mitoraka singam-bolo amin'ny vaton'antsamotady, ka mahavoa azy. 17Ny isan'ny lehilahy amin'Israely afa-tsy ny Benjamita, dia efatra hetsy, samy mahatan-tsabatra sy mpanafika avokoa. 18Dia niainga ny zanak'Israely niakatra tany Betela, ary nanontany an'Andriamanitra hoe: Iza aminay no hiakatra voalohany hiady amin'ny taranak'i Benjamina? Hoy ny navalin'ny Tompo: Jodà no hiakatra voalohany. 19Dia niainga maraina ny zanak'Israely, ka nitoby tandrifin'i Gabaà.
20Nandroso ny lehilahy amin'Israely hiady amin'ny an'i Benjamina ary nilahatra ny lehilahy amin'Israely hamely azy teo anoloan'i Gabaà. 21Fa nivoaka avy ao Gabaà ny taranak'i Benjamina tamin'izay, ary lehilahy roa arivo sy roa alina tamin'Israely no nataony maty niampatra tamin'ny tany androtr'io ihany.
22Nohamafisin'ny vahoaka dia ny lehilahy amin'Israely anefa ny herim-pony ka nilahatra hiady teo amin'ny fitoerana nialaharany tamin'ny andro voalohany indray izy. 23Dia niakatra nitomany teo anatrehan'ny Tompo mandra-paharivan'ny andro ny zanak'Israely; sady nanontany an'ny Tompo nanao hoe: Mbola handeha hiady amin'ny taranak'i Benjamina, rahalahiko, ihany indray va aho? Ka hoy ny navalin'ny Tompo: Miakara hamely azy. 24Dia nanatona ny taranak'i Benjamina indray ny zanak'Israely tamin'ny andro faharoa. 25Ka nivoaka avy ao Gabaà hamely azy ny taranak'i Benjamina tamin'io andro faharoa io, ary lehilahy valo arivo sy iray alina, samy mahatan-tsabatra tamin'ny zanak'Israely no nataony maty niampatra tamin'ny tany indray.
26Niakatra nankany Betela ny zanak'Israely rehetra sy ny vahoaka rehetra; nipetraka nitomany teo anatrehan'ny Tompo, nifady hanina mandra-paharivan'ny andro, nanolotra sorona dorana aman-tsorom-pihavanana teo anatrehan'ny Tompo, 27ary nanontany an'ny Tompo ny zanak'Isrealy, fa teo ny fiaran'Andriamanitra tamin'izany andro izany; 28ary teo anoloany Finea zanak'i Eleazara zanak'i Aarona, tamin'izany andro izany, ary hoy izy ireo hoe: Mbola handeha hiady amin'ny taranak'i Benjamina rahalahiko ihany va aho sa tokony hitsahatra? Dia hoy Iaveh: Miakara fa hatolotro eo an-tànanao izy rahampitso.
29Tamin'izay nasian'Israely otrika manodidina an'i Gabaà; 30ary niakatra hamely ny taranak'i Benjamina ny zanak'Israely tamin'ny andro fahatelo, ka nilahatra hiady teo anoloan'i Gabaà, toy ny taloha ihany. 31Dia nivoaka hamely ny vahoaka ny taranak'i Benjamina, ka nety ho voatarika hanalavitra ny tanàna. Rafitra namely sy namono tamin'ny vahoaka toy ny teo aloha izy, eo amin'ireo làlana any an-tsaha, izay miakatra any Betela ny iray, ary miakatra any Gabaà ny iray; dia nahafatesany sahabo ho telopolo lahy amin'Israely. 32Hoy ny taranak'i Benjamina: Indro fa resy eo anoloantsika toy ny taloha ihany izy ireo. Fa hoy kosa ny zanak'Israely: Ndeha handositra ka ataovy tari-dositra hanalavitra ny tanàna amin'ireo làlalan ireo. 33Dia niala tamin'izay nitoerany àry ny lehilahy amin'Israely rehetra, ka nilahatra tany Baala-Tamara; ny olon'Israely nanotrika kosa dia niantoraka avy amin'ny fitoerana nisy azy, tao amin'ny tany lemak'i Gabaà, 34ka lehilahy iray alina voafantina tamin'Israely rehetra, no tamy avy teo anoloan'i Gabaà. Mafy ny ady, ary tsy nampoizin'ny taranak'i Benjamina fa efa mananontanona azy ny loza. 35Nasian'ny Tompo teo anoloan'Israely Benjamina, ka zato amby dimy arivo sy roa alin-dahy samy mahatan-tsabatra no matin'ny zanak'Israely tamin'i Benjamina androtr'io.
36Koa hitan'ny taranak'i Benjamina fa resy izy; fa ny lehilahy amin'Israely no nihemotra teo anatrehan'i Benjamina dia noho ny fitokiany ny otrika napetrany hamely an'i Gabaà. 37Fa niroatra faingana nankany Gabaà ireo olona natao otrika ireo, rahefa izany dia nandroso ny lehilahy natao otrika namely ny tanàna manontolo tamin'ny lelan-tsabatra. 38Ary nisy famantarana nifaneken'ny lehilahy amin'Israely tamin'ireo nanao otrika, dia ny hananganan'ireo setroka nijofo avy ao an-tanàna, 39ka nifontina tamin'ny ady ny lehilahy amin'Israely. Ny Benjamita efa nahafaty sahabo ho telopolo lahy tamin'izy ireo, ka dia hoy izy: Resy marina tokoa eo anatrehantsika izy toy ny tamin'ny ady voalohany mihitsy. 40Kanjo efa niantomboka nidonaka ny setroka niakatra avy ao an-tanàna sahala amin'ny rahona, dia niherika ny Benjamita ka nahita ity tanàna manontolo nidoak'afo nanakatra ny lanitra. 41Ny lehilahy amin'Israely nifontina taminy, ary ny lehilahy amin'i Benjamina nivadi-pò tery nahita fa ianjeran'ny loza izy, 42ka niamboho teo anoloan'ny lehilahy ami'Israely izy ireo, nihazo ny làlana mankany an'efitra; nefa nenjehin'ny mpiady mafy izy; ary ny tao an-tanàna novonoiny samy eo amin'ny fitoerana nisy azy avy. 43Notemerany sy nenjehiny Benjamina dia novonoiny teo amin'izay niatoany hatrany an-tandrifin'i Gabaà any amin'ny fiposahan'ny masoandro. 44Valo arivo sy iray alin-dahy, samy lehilahy mahery avokoa amin'i Benjamina no maty. 45Izay niamboho dia nandositra nankany an'efitra any akaikin'ny haram-baton'i Remona. Dimy arivo lahy no matin'ny zanak'Israely teny an-dàlana, dia nenjehiny mafy hatrany Jedeona ihany izy ireny, ka nahafatesany roa arivo koa. 46Dimy arivo sy roa alin-dahy mahatan-tsabatra no tontalin'ny Benjamita maty tamin'izany andro izany, samy lehilahy mahery avokoa.
47Ny enin-jato lahy niamboho sy nandositra nankany an'efitra, any amin'ny haram-baton'i Remona dia nitoetra tao amin'ny haram-baton'i Remona efa-bolana. 48Dia niverina tany amin'ny taranak'i Benjamina indray ny lehilahy amin'Israely, ka nasiany tamin'ny lelan-tsabatra avokoa hatramin'ny tanàna, na olona na biby fiompy, ka hatramin'izay rehetra hitany tany. Ary nodorany tamin'ny afo avokoa ny tanàna rehetra hitany. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0343 seconds